Alan’i Vohibola: Tra-tehaka ny hazo halatra an-jatony
lundi, 17 août 2020 15:59
Tra-tehaky ny fikambanana Razan’ny Vohibola ny hazo halatra maherin’ny 200 isa tany Tampina, Ambinaninony, Brickaville, ny tolak’andron’ny zoma 14 aogositra 2020.
Ahitana “bois ronds”, “bois carrés”… ireo hazo tsy ara-dalàna izay nalaina an-tsokosoko tao amin’ny atiala arovana ao Vohibola ireo.
Mponina eo an-toerana ihany no nahatratrarana ireto hazo halatra ireto.
Nampandrenesina ara-potoana mikasika ny zavamisy ny lehiben’ny “cantonnement” any Brickaville sy ny talem-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy any Toamasina.
Ao anatin’ny Kaominina ambanivohitr’Ambinaninony, Distrikan’i Brickaville, no ahitana ny alan’i Vohibola.
Amoron’ny lakandranon’ny Pangalana, ary sahabo 20 kilometatra miala ny lalam-pirenena faha-2 mankany Toamasina no misy io faritra arovana izay sahanin’ny fikambanana Razan’ny Vohibola io.
Ahitana Fokontany miisa efatra manodidina ny atiala, ka iray amin’ireny i Tampina, izay anisan’ny garan-dalamby amin’iny zotra TCE iny.
Mitahiry karazan-javamaniry sy biby izay tsy hita na aiza na aiza eto ambonin’ny tany ny alan’i Vohibola.
Ao aminy ihany, ohatra, no ahitana ny karazan-tsahona sy tàna ary orchidées bitika indrindra manerana izao tontolo izao.
Tsy latsak’izay ihany koa ireo karazana varika (lémuriens) samihafa, izay mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny firenena rehetra ny fananana azy.
Anisan’ny toerana nankafizin’ny filoha Tsiranana Philibert ny alan’i Vohibola, ary mbola hita any an-toerana mandrak’anio ny sisa tavela tamin’ny fotodrafitrasa naorina tany an-toerana tamin’ny fotoan’androny.
Toerana nahasarika mpikaroka sy mpiofana momba ny ala sy ny tontolo iainana avy eto an-toerana sy manerantany ihany koa ny atialan’i Vohibola hatramin’ny vanimpotoanan’ny fanjanahatany ka hatramin’izao ankehitriny izao.
Azo sokajiana ho anisan’ny vako-pirenena mihitsy ny faritra misy ny atiala sy ny manodidina azy.
Noho ny faritra arovana izay ahitana hazo tsara sy noho saro-dalana dia manjaka ny fandripahana io atiala miavaka any amoron-tsiraka atsinanana io.
Tompon'andraikitra ara-panjakana isan-tsokajiny, olomboafidy hatramin’ny tompon'andraikitra eny ifotony, mpandraharaha samihafa, indrindra ireo any Toamasina, no voalaza fa atidohan’ny famotehana ny atialan’i Vohibola.
Niteraka resabe tamin’ny fampahalalam-baovao, tsy teto an-toerana ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy ihany koa, izany tranga mampalahelo izany ny taona 2018 sy 2019.
Efa nandray fepetra hentitra ny fitondrana saingy mahita hirika hatrany ny mpanao ratsy.
Nanararaotra ny fihibohana noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19 ireo zatra mpanao tany lavitr’andriana koa dia mbola nanao ny nataony ihany izy ireo, tahaka ny hita saika manerana ny Nosy hatramin’ny nanombohan’ny fahamehana ara-pahasalamana.
Ny mampalahelo dia ireo mponina eny an-toerana ihany, izay tokony hifanome tanana amin’ny fiarovana, no mpiray tendro amin’ny mpamotika.
Tsy milavo lefona eo anatrehan’izany anefa ireo mpikambana ao amin’ny Razan’ny Vohibola.
An-tsitrapo no iarovan’izy ireo ny ala izay inoany fa navelan’ny razana ho lovan’ny taranaka mifandimby.